Uhurru Kenyatta “Somalida dalkeena joogto waan iska saareynaa. – idalenews.com
Uhurru Kenyatta “Somalida dalkeena joogto waan iska saareynaa.
M/weynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlay xaflad tababar loogu soo xiray saraakiil boolis ah oo ka dhacday magaalada Nairobi ayaa waxaa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku nool ay doonayaan inay dalkiisa bur buriyaan sida uu yiri.
M/weyne Kenyatta waxaa uu Soomaalida ku tilmaamay inay yihiin bulsho aan dooneyn dawladnimada isla markaana ay dalkooda bur buriyeen doonayaana inay Kenya u bur buriyaan sida Soomaaliya oo kale hase ahaatee ay ka hor tagayaan.
“Sida aad ogtihiin Soomaaliya waa dal aan dawlad laheyn muddo dheer marka waxay doonayaan inay dalkeena u bur bur buriyaan marka waan iska celinaynaa” ayuu yiri Uhhuru Kenyatta oo M/weyne ka ah dalka Kenya waxaana uu intaa ku daray in dadka Soomaaliyeed aysan dalkooda dhibaatada la joogin oo ay Kenya la galeen.
“Xaduuda ayay kasoo gudbeen dalkeena ayayna dhibaato ku noqdeen” ayuu sidoo kale yiri.
Dawlada Kenya waayahaan waxay waday raaf ay ku haysay dadka Soomaaliyeed ee dalkeeda ku nool ayadoona booliska Kenya lagu eedeeyay inay si xaquuqda.
Bale: “wuxuu ahaa Goolkii nolosheyda”.
Shirka dib-u-heshiisiinta Gobolada Jubbooyinka oo dib u furmaya.